Shukulaatada shukulaatada aan lahayn foornada, macmacaan aad u fudud oo la sameeyo. | Cunnooyinka jikada
Shukulaatada shukulaatada aan lahayn foornada
Montse Morote | 10/06/2021 09:00 | La cusbooneysiiyay 17/06/2021 13:45 | Delicatessen, Postres
Shukulaatada shukulaatada aan lahayn foornada, macmacaan fudud oo hodan ah gaar ahaan kuwa jecel shukulaatada, farxad. Waxaa lagu diyaariyey waxyaabo kooban waana mid aad u wanaagsan. Flan dhaqameedkaWaxaa lagu diyaariyaa foornada bain-marie, tani way ka fududdahay. Waxaa sidoo kale la samayn karaa ukumo la'aan waxaana lagu diyaarin karaa jelly, curd ama sida kan aan diyaariyay.
Shukulaatada shukulaatada waa macmacaanka ugu fiican ee carruurtaWaa kareem aadna qani u ah, waxaad isticmaali kartaa shukulaatada caanaha ama shukulaatada madow, waxaad dhigi kartaa karamell dareere ah, in kasta oo aanan ku darin.
4 beed jaallo ah
4 qaado oo ah budada kookaha
4 qaado oo bur ah galley (Masag)
125 gr. sonkor ah
Si aan ugu diyaarinno garab shukulaatada foornada la'aan, marka hore waxaan digsi dabka saaraynaa with qaybo liitar caano ah, ku dar sonkorta. Waanu walaaqi doonnaa, waxaan yeelan doonaa kuleyl dhexdhexaad ah. Waxaan ku ridi doonaa inta hartay caanaha baaquli.
Waxaan kala soocnaa kuwa cadcad jaallo ah ukunta.
Waxaan jaalka ku shubi doonnaa baaquli halka aan ku leenahay caanaha, walaaq oo qas. Isla baaquli waxaan ku dari doonaa 4 qaado oo bur bur ah. Waan walaaqnaa, waan isku daraynnaa illaa wax walba la kala diro.
Digsiga aan ku hayno dabka, waxaan ku dari doonnaa budada kookaha waxyar yar, waan isku walaaqi doonnaa illaa wax walba ay kala milmaan.
Markuu shukulaatada kala baxo, waxaan ku darnaa baaquli meesha aan ku leenahay caanaha, ukunta iyo galleyda, digsiga.
Waxaan isku dareynaa wax walba illaa ay weynaadaan, markay qaro weyn tahay waan iska saareynaa oo waxaan ka buuxinaynaa dhowr koob oo kareemka shukulaatada ah Waxaan u oggolaanay inay xanaaqsan yihiin oo aan dhigno qaboojiyaha.
Waxaan u adeegnaa !!!
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Asxaabta » Delicatessen » Shukulaatada shukulaatada aan lahayn foornada
Runtii kani ma aha flan, kaliya shukulaatada kareemka duudduuban, hodan ah laakiin flan maahan !!
Ubax iyo saladh karooto leh tufaax
Chorizos oo ku jira khamri cad